६ अर्ब ६३ करोडको आईपीओ स्वीकृतीकाे पर्खाइमा, लाै हेर्नुहाेस कुन कुन कम्पनीकाे आउँदैछ आईपीओ ? - Aarthiknews
६ अर्ब ६३ करोडको आईपीओ स्वीकृतीकाे पर्खाइमा, लाै हेर्नुहाेस कुन कुन कम्पनीकाे आउँदैछ आईपीओ ?
काठमाडाैं । आईपीओ निष्कासनका लागि हाल १७ कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । बोर्डको वेवसाइडलाई आधार मान्दा ११ जलविद्युत कम्पनीसहित १७ कम्पनीले आईपीओका लागि निवेदन दिएको देखिन्छ । यी कम्पनीहरुले ६ अर्ब ६३ करोड २० लाख ५९ हजार ६०० रूपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्न बोर्डमा निवेदन दिएका हुन ।
निवेदन दिएकामध्य मैलुङखोला जलविद्युत कम्पनी र सीईडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी दुई वर्षदेखि स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका छन् । यी दुबै कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्न २०७४ मै आवेदन दिएका थिए । सीईडीबीले असार २७ गते र मैलुङ्खोलाले असोज २० गते निवेदन दिएको थियो ।
बोर्डले गत जेठ ७ गते मैलुङखोलालाई विद्युत नियमन आयोगको पूर्व स्वीकृति लिन भनेको छ । सीईडीबीको स्वीकृति प्रकृया अन्तिम चरणमा रहेको छ । विद्युत नियमन आयोग गठनपूर्व बोर्डले प्रकृया पुरा गरि स्वीकृति प्रदान गर्ने गरे पनि हालको व्यवस्थामा जलविद्युत कम्पनीहरुले विद्युत नियमन आयोगको पूर्व स्वीकृति पश्चात मात्र बोर्डमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।
आईपीओका लागि मर्चेण्ट बैंकसँगै पुनर्बीमा कम्पनीको पनि निवेदन छ । पुनर्बीमा कम्पनीले जारी पूँजी कम गर्न उच्च अदालत पाटनबाट स्वीकृति पाईसकेकाले अव आईपीओका लागि पनि बाटो खुलेको छ । कम्पनीले १ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्नेछ ।
त्यस्तै सिबिआईएल क्यापिटल पनि आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा छ । क्यापिटलले ३ करोड रूपैयाँ बराबरको आईपीओ विक्री गर्न लागेको हो ।
पछिल्लो समय कात्तिक १५ गते विक्री बन्द भएको शिवश्री हाइड्रोपावरको आईपीओ पश्चात प्राथमिक बजार आईपीओ विहिन अवस्थामा रहेको छ ।
यद्यपी यो बजारमा बैंकहरुको ऋणपत्र भने निष्कासन भईरहेको छ । आईपीओका लागि आवेदन दिने धेरैजसो जलविद्युत कम्पनीहरु भएकाले पनि स्वीकृतिमा ढिलाई भएको बोर्डको भनाई छ । पछिल्लो समय जलविद्युत कम्पनीहरुको शेयरमूल्य दोस्रो बजारमा अंकित मूल्यभन्दा कम हुनु शिवश्री हाइड्रोको शेयर प्रत्याभूतकर्ताहरुमा देखिएको समस्याले गर्दा स्वीकृतिमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको बोर्डले प्रष्ट पारेको हो ।
शिवश्री हाइड्रोको शेयर प्रत्याभूतकर्ताहरुले सबै शेयर सकार्न नसक्ने भनेपछि हालसम्म पनि कम्पनीको शेयर सूचीकृत हुन सकेको छैन् । कम्पनीको सर्वसाधारणले नकिनेको शेयर सकार्ने सहमति मुक्तिनाथ क्यापिटल र सिबिआईएल क्यापिटलले गरेका थिए ।
सप्तकोशी डेभलपमेण्टको बुक क्लोज मिति संशोधन
इजरायलका प्रधानमन्त्रीलाई कोरोना संक्रमण
कृषि विकास बैंकद्धारा ५ नं.प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई चेक हस्तान्तरण
हिमगिरी हाइजिनद्वारा नेपाल प्रहरीलाई स्यानिटाइजर हस्तान्तरण
फागुन महिनाको मोबाइल बैंकिङ लिडर बन्यो मुक्तिनाथ विकास बैंक
७७ जिल्लामा सेवा दिँदै कृषि विकास बैंक
'वीर अस्पतालमा मृत्यु भएका दुबै जना कोरोना 'सस्पेक्टेड'मा थिएनन'
कोरोना सन्त्रासः १ सय ६९ कैदी बन्दी जेल मुक्त
‘खुलेको आकाशले भन्छ, काठमाडौं ३० वर्षअघि फर्कियो’
दुई लाख अमेरिकन मर्ने प्रक्षेपणपछि बल्ल खुल्यो ट्रम्पको चेत
आइसोलेशनमा निधन भएका बिरामीको रिपोर्ट नेगेटिभ
कोरोना संक्रमणको रिपोर्ट नआउँदै वीर अस्पतालमा दुईको मृत्यु